पञ्चस्कन्धबाट कसरी कर्म बन्छ ? थप केही उदाहरण ।
१. खांदा– पहिले आंखाले देख्दा चक्षु विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ । यसको आधारमा सम्झना भएर मनो विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ । यसैको आधारमा पूर्व संखार उत्पत्ति हुंदै संज्ञाले चिन्ने, पहिचान गर्ने, यो भात, दाल, तरकारी, कोकाकोला हो, र मीठो छ, स्वास्थ्य बर्धक छ भनी चिन्नुको साथै सकारात्मक मूल्यांकन गर्दछ । यसको आधारमा सुख वा आनन्द अनुभूति गर्दै सुख वेदना उत्पन्न हुन्छ । यसकै आधारमा खाऊं भन्ने इच्छा नयां संखार उत्पत्ति हुन्छ । यसकै आधारमा महाभूत आदि रूप उत्पन्न भएर हात उठ्दछ र हातको सहयोगले उठाएर खाने पिउने कम्म गर्दछ ।
यसरी सम्झना उत्पत्ति हुंदा हृदय वस्तुबाट सुरु हुने हुनाले जति जति हृदय वस्तुबाट पूर्व संखारको रूपमा अरबौ अरबौ चित्त उत्पत्ति हुन्छन्् । त्यस मध्ये प्रत्येक १७ वटा चित्तले एउटा रूप कलाप उत्पन्न गर्छ । जस्तै १७ अरब चित्त उत्पन्न भए १ अरब रूप उत्पन्न हुन्छ ।र् यसरी अराबौं रूप उत्पन्न भए अनुसार शरीर भरि फिजिन्छ । हृदयमा शान्ति, शितल वा सुख भएमा त्यसको प्रभाव फैलिदै सारा शरीर हल्का सुखदायी अनुभूति हुन्छ । अकुसल विचारको कारणले हृदयदेखि भारीपन, छटपटी फैलिदै सारा शरीर भरि गह्रुंगो, तातो आदि रूप उत्पन्न भएर, दुक्खदायी अनुभूति हुन्छ । यस प्रकार प्रतिक्षण चित्तको कारणबाट शरीरमा कुनै न कुनै हलन चलन हुने वा नभएमा पनि शरीर भित्र भारी हल्का, तातो चिसो कडा नरम, चिलाउने, दुख्ने, फूरफूरिने आदि विभिन्न स्वभाव उत्पन्न हुन्छन् ।